Ahoana ny fomba hampiasana ny fandikan-teny mandeha ho azy ao amin'ny Google Chrome | Androidsis
Rehefa miditra amin'ny pejy vahiny ao amin'ny Google Chrome isika dia omena alalana manatanteraka ny fandikana mandeha ho azy ny pejy web voalaza. Safidy tsara raha fiteny tsy haintsika io. Hatramin'izany fomba izany dia ho azontsika atao ny mahatakatra ny atiny rehetra miseho ao amin'ilay tranonkala voalaza etsy ambony. Ity fandikan-teny ao amin'ny navigateur ity dia azo alefa tsy misy fanao, na dia tsy matetika aza. Noho izany, asehonay aminao ny fomba hampiasana azy io.
Azonao atao ny mampiasa azy raha ilaina izany, satria a endri-javatra mahasoa ao amin'ny Google Chrome, azo alaina ho an'ny telefaona Android ihany koa. Inona no tsy maintsy ataontsika amin'ity raharaha ity?
Tokony hanokatra Google Chrome amin'ny telefaona Android isika. Raha vantany vao ao anaty tranokala dia tsy maintsy manindry ny menio isika, izay ireo teboka telo mitsangana izay miseho eo amin'ny faritra ankavanan'ny browser. Rehefa tsindrio dia miseho ny andiana safidy eo amin'ny efijery, ao anaty lisitra iray. Mila miditra amin'ny fikirakirana isika.
Ao anatin'ny fikirakirana dia mila mahita isika ary mankany amin'ny faritra amin'ireo fiteny. Ny zavatra hataontsika amin'ity fizarana ity dia ny miditra amin'ireo fiteny tadiavintsika. Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina fa tsy maintsy miditra ao amin'izy ireo isika araka ny filaharan'ny safidintsika. Ka ny zavatra lojika indrindra dia ny fampidiranao ny fitenin-drazanao aloha, na ilay ampiasainao amin'ny navigateur na amin'ny pejy izay matetika no tsidihinao.
Raha vantany vao nampiditra ireo fiteny ireo tao amin'ny Google Chrome izahay dia afaka mivoaka ny fikirakirana. Ity fandikan-teny amin'ny milina ity dia efa navadika, ary ho afaka hanamarina azy isika amin'ny manaraka hidirantsika tranokala amin'ny iray amin'ireo fiteny nomarihinay ato amin'ity lisitra ity. Izay hanamora ny fivezivezena.
Isaky ny mila izahay, Google Chrome manome antsika ny fahafahana manampy na manala fiteny amin'ity lisitra ity namorona fotsiny isika. Ny dingana dia mitovy foana, noho izany dia ho mora ny mitantana azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hampiasana ny fandikan-teny mandeha ho azy an'ny Google Chrome amin'ny Android
Google Play Film afaka mamela anao hanavao sarimihetsika HD ho 4k maimaim-poana